တရုတ်သွေးပါတဲ့ ယူအက်စ်အိုးပင်း ချန်ပီယံ ရာဒါကနူးအတွက် တရုတ်ကလူတွေ အောင်ပွဲခံ ဂုဏ်ယူနေကြ - ข่าวสด
တရုတ်သွေးပါတဲ့ ယူအက်စ်အိုးပင်း ချန်ပီယံ ရာဒါကနူးအတ...
တရုတ်သွေးပါတဲ့ ယူအက်စ်အိုးပင်း ချန်ပီယံ ရာဒါကနူးအတွက် တရုတ်ကလူတွေ အောင်ပွဲခံ ဂုဏ်ယူနေကြ
13 ก.ย. 2564 - 18:45 น.
ဗြိတိသျှတင်းနစ်မယ် အီမာရာဒါကနူး ယူအက်စ်အိုးပင်းတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရုတ်ပြည်က လူတွေ အောင်ပွဲခံနေကြတာဟာ အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာ သူ ဗိုလ်စွဲနိုင်လိုက်တာ တစ်ခုတည်းကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကက သူ့မှာ တရုတ်သွေးပါနေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ရာဒါကနူးကို ကနေဒါမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး အဖေက ရိုမေးနီးယား၊ အမေက တရုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူအသက်၂နှစ်မှာ လန်ဒန်ကို ပြောင်းလာခဲ့တာပါ။
တရုတ် လူမူကွန်ရက်မီဒီယာပေါ်က လူအများစုဟာ အသက်၁၈နှစ် ရာဒါကနူးအတွက် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူနေကြပြီး သူ့အမေနဲ့ ဘိုးဘေးတွေနေခဲ့တဲ့နေရာကို အစွဲပြုကာ သူ့ကိုလည်း ဒန်ဘီက ကောင်မလေးလို့ ခေါ်နေကြပါတယ်။
တရုတ်ဘာသာစကား မန်ဒရင်းလို သူ့ ပရိသတ်တွေကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတဲ့ ဗီဒီယိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း "ဒန်ဘီ အရှေ့မြောက်က မိန်းကလေးတစ်ယောက်လို သူပြောနိုင်တာ ဘယ်လောက် အံ့အားသင့်စရာကောင်းလိုက်လဲ"လို့ ကွန်မန့်တစ်ခုမှာ ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။
သူ့မှာ တရုတ် သွေးပါနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အင်အာဗျုးတစ်ခုမှာ ရာဒါကာနူးပြောခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း တရုတ်ပြည်အွန်လိုင်းမှာ တစ်ချို့ ကဂုဏ်ယူပြောနေကြပါတယ်။
"တရုတ်ပြည်ကို ပုံမှန်လာလည်တယ်လို့ သူကပြောတယ်။ပြီးတော့ သူအားကျတဲ့ ကစားသမားတွေ ထဲမှာလည်း လီနာပါတယ်လို့ ပြောတယ်။ သူ့စွမ်းဆောင်မှုကို အရမ်းဂုဏ်ယူတယ်။ "လို့ ဝီဘိုအသုံးပြုသူတစ်ယောက်က အရင် တရုတ် တင်းနစ်ကစားသမားဟောင်း လီနာကို ရည်ညွှန်းပြီး ပြောပါတယ်။
အခြားတစ်ယောက်ကလည်း တိုင်ဝမ်ပေါ့အဆိုတော် ရီနီယန်းနဲ့ ဆင်တာကို ရည်ညွှန်းပြီး "တင်းနစ်ကွင်းထဲက ရီနီယန်းကို ငါတို့ အားပေးရမယ်" လို့‌ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အခြား ဝီဘို သုံးနေတဲ့ သူတစ်ဦးကတော့ "သူက ဗြိတိသျှနိုင်ငံသူလေ။ ဘာလို့ သူ့ကို ငါတို့က ငါတို့ အပိုင်ပုံစံမျိုး ပြောနေကြတာလဲ။ "
အင်တာဗျုးတွေထဲမှာတော့ ရာဒါကနူးက သူ့အမေနဲ့ သူ့အမေဘက်က မိသားစုတွေကို ချီးကျုး ဂုဏ်ပြုစကားတွေ ပြောပါတယ်။
"သူတို့ က စိတ်အရမ်းမာတဲ့သူတွေ။ ဘယ်အရာကမှ သူ့တိုကို ပြိုလဲသွားအောင် မလုပ်နိုင်ဘူး။ ကျွန်မအနေနဲ့ အမေ့ဆီက လှုံ့ဆော်အားပေးမှုကြီးတစ်ခု ရခဲ့တယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အမေက အလုပ်အရမ်းလုပ်တဲ့သူ"လို့ သူကပြောပါတယ်။
အားလပ်ရက်တွေမှာ သူ့အမေ ဘိုးဘေးဘီဘင်တွေပိုင်တဲ့ သူ့အမေနေခဲ့တဲ့ ရှန်ယန်းမြို့က အိမ်ကို သူသွားလည်လေ့ရှိပြီး တိုင်ဝမ်- တယ်လီဗေးရှင်း ဇာတ်လမ်းတွဲကို ကြည့်ရတာအကြိုက်ဆုံးလို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ တရုတ် အာရှသွေးပါတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် လေလာဖာနန်ဒက်စ်နဲ့ အီမာရာဒါကနူး
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့ကကျင်းပတဲ့ ယူအက်စ်အိုးပင်း တင်းနစ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ ရာဒါကနူးက ကနေဒါက ဆယ်ကျော်သက် လေးလာဖာနန်ဒက်စ်ကို ၂ ပွဲဆက် အနိုင်ရပြီး ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူက ၄၄နှစ်အတွင်း ဂရင်းစလင်း ချန်ပီယံဖြစ်တဲ့ ပထမဆုံးဗြိတိသျှအမျိုးသမီးအဖြစ် စံချိန် တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကနေဒါက ဖာနန်ဒက်စ်ဟာလည်း သွေးရောတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ အဖေက အီကွေ‌ဒေါ၊ အမေက ဖိလစ်ပိုင်ကပါ။
ဒါကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်က ဆိုရှယ်မီဒီယာသုံးတဲ့ သူတွေကလည်း ဖိလစ်ပိုင်သွေးပါတဲ့ ဖာနန်ဒက်စ်ကို ဂုဏ်ယူရေးသားနေကြပါတယ်။
"ကမ္ဘာ့အဆင့် တင်းနစ်ဗိုလ်လုပွဲ ဖိလစ်ပိုင်တစ်ယောက်တက်လာတာ တွေ့ရတာ ဝမ်းသာစရာကောင်းတယ် "လို့ တစ်ယောက်က ဖေ့စ်ဘုခ်မှာ ရေးပါတယ်။
အလားတူ ဖာနန်ဒက်စ် ကိုယ်တိုင်ကလည်း အင်တာဗျုးတစ်ခုမှာ ဖိလစ်ပိုင် ယဥ်ကျေးမှုကို သိပ်မသိပေမဲ့ ဖိလစ်ပီနို အစားအစာကိုတော့ ကြိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
"ဖိလစ်ပီနို ယဥ်ကျေးမှုအကြောင်းကို ကျွန်မအများကြီးမသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်မအဖိုး ဟင်းချက်တာတော့ အရမ်းကောင်းတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်မ ကနေဒါနိုင်ငံ တိုရန်တိုမြို့ကို ပြန်ရောက်သွားရင် အရမ်းစားလို့ကောင်းတဲ့ အစားအစာတွေ ကျွန်မအဖိုးက ချက်ပြုတ်ကျွေးတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်မစားချင်တဲ့ ဖိလစ်ပီနိုအစားအစာကို လုပ်ပေးတာပေါ့ ။"
သူ့ရဲ့ နည်းပြလည်းဖြစ် အဖေလည်းဖြစ်တဲ့ ဘောလုံးသမားဟောင်း ဂျို့ကလည်း သတင်းထောက်တွေကို အခုလိုပြောပါတယ်။
"ဖိလစ်ပိုင် လူ့အဖွဲ့အစည်းက သူ့နောက်မှာရှိပြီး အားပေးနေကြတာကို ကျွန်တော်တကယ် အားရကျေနပ် တယ်။ သူ့သွေးထဲမှာ ဖိလစ်ပီနို သွေးရှိနေတယ်လေ။"
อัลบั้มภาพ တရုတ်သွေးပါတဲ့ ယူအက်စ်အိုးပင်း ချန်ပီယံ ရာဒါကနူးအတွက် တရုတ်ကလူတွေ အောင်ပွဲခံ ဂုဏ်ယူနေကြ